Gacanta Masiirka 2 Ciyaar Lagu Heli Karo Bilaash Waqti Xaddidan | Waxaan ka socdaa mac
Ciyaarta gacanta ee Masiirka 2 oo bilaash lagu heli karo wakhti xaddidan
Toddobaadkan, ragga Ciyaaraha Epic waxay ciyaarta ka dhigayaan mid si bilaash ah noo furan Gacanta qaddarka 2, ciyaar ah, marka lagu daro la jaanqaadka Windows, sidoo kale la jaan qaada macOS, markaa hadaad horeyba ugu raaxeysatay nooca koowaad oo aad ubogtay, waad sii wadi kartaa sameynta adiga oo aan qarash gareeynin hal euro.
Gacanta Fate 2 waxay leedahay qiimo joogto ah oo ku yaal bakhaarka Epic oo ah 23,99 euro, laakiin waxaan ku soo degsan karnaa bilaash illaa Khamiista soo socota, Abriil 29 markay tahay 5 galabnimo (waqtiga Isbaanishka). Gacanta Fate 2 waa ciyaar guddi ah oo ka kooban hawlo badan oo la ciyaari karo marar badan, halkaas oo aan ku fureyno kaararka si aan u dhisno tacaburkeenna oo aan uga adkaanno cadawga dagaalka waqtiga dhabta ah.
1 Hantida Masiirka 2 shuruudaha
Hantida Masiirka 2 shuruudaha
Si aad ugu raaxeysato cinwaankan 'Mac', waa in la maareeyaa OS X 10.9 ama ka sareeya oo leh 5 GHz Intel Core i2.4 processor, oo ay wehliyaan 4 GB oo RAM ah iyo 4 GB oo keyd ah. Codadka waxaa lagu heli karaa oo keliya Ingiriisiga, ee ma ahan qoraallada lagu tarjumay Spanish.
Gacanta Qaddarka 2 ayaa loo heli karaa adiga Si bilaash ah u soo degso illaa Abriil 29 5 galabnimo (waqtiga Isbaanishka). Si aad uga faa'iideysato dalabkan, waa inaad sameysataa koonto Epic ah (haddii aad horay u ciyaartay ama aad ku ciyaartay isla xisaabtu way kuu shaqeynaysaa), booqo xidhiidhkan ama furo arjiga oo ka raadi ciyaarta gudaheeda qaybta Bakhaarka.
Uma baahnid inaad soo dejiso ciyaarta waqtigaas, illaa hal mar la xidhiidha koontadayada, waad ku raaxeysan kartaa markaad waqti hesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Ciyaarta gacanta ee Masiirka 2 oo bilaash lagu heli karo wakhti xaddidan
Muraayadaha Apple-ka ee loo yaqaan 'AR' ayaa hoos u dhigaya horumarkiisa sida ay sheegtay DigiTimes
Shixnadaha AirTag waxay sii wadaan inay uruuriyaan dib u dhaca iibsadayaasha cusub